FAA'IIDOOYINKA IYO WAXYEELOOYINKA YERUUSAALEM KA SAMAYSAN EE JIDHKA BINI'AADAMKA: WAXA AY TAHAY IYO SIDA LOO ISTICMAALO, SAWIR KA MID AH PEAR EARTH, SIFOOYINKA BOGSASHADA IYO SIFOOYINKA, IYO SIDOO KALE CONTRAINDICATIONS - BEER CAGAARAN
Jerusalem artichoke - warshad gaar ah, waxay leedahay digriiga, sida baradho, ubax sida gabbaldayaha. On tayada faa'iido leh ayaa dhaaftay inta badan khudradda kuwaas oo ku koray by bannaanka on goobaha. Dhamaan tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in uu haysto kiimiko qani ah.
Waxay ka kooban tahay tiro badan oo ah astaamiyo iyo fitamiino kuwaas oo si wanaagsan u saameyn kara xubnaha iyo nidaamyada jirka oo ka faa'iideysta qofka. Waxaan soo jeedineynaa in aan ogaanno wax walba oo ku saabsan nooca dhirta ay tahay, waxa dhab ahaan loo isticmaalo carruurta, haweenka iyo ragga, sida iyo sababta loogu isticmaalo daawada, haddii khudradda ay keeni karto waxyeello, iyo sidoo kale in lagu sawiro sawir gacmeedka Jerusalem artichoke, oo loo yaqaanno pear earth .
Waxyaabaha kiimikada ee khudradda
Aan aragno waxa asalkani uu faa'iido u leeyahay jirka aadanaha.
Faa'iidada ugu weyn ee artichoke Yeruusaalem waa in ay ku jiraan ku dhowaad lahayn baruurta iyo kolestaroolka.
Qodobka kalooriga ma aha mid sare: 61 kalluun ayaa ku jira 100 garaam oo digriiga ah:
borotiinka - 2.1 gr;
carbohydrates - 12.8 garaam.
Marka lagu daro BZHU, waxaa ku jira waxyaabo yaryar iyo macro oo waxtar u leh jidhka bini'aadamka:
fitamiinada kooxda: A, B, PP, C, E;
Macruufiyeyaasha: magnesium, sodium, potassium, fosfooraska, kalsiyum;
Waxyaabaha raadraaca: birta, aluminium, iodine, sulfur, zinc, copper, fluorine, manganese, boron, silicon.
Halabuurka hodanka ah ee Jerusalem artichoke wuxuu u oggol yahay isticmaalka ballaaran ee daawada, qurxinta, karintaiyo sidoo kale sidii dalagga feedhaha xoolaha.
Marka xigta waxaad arki kartaa sawir gacmeedka Jerusalem artichoke.
Waa maxay faa'iidooyinka carruurta?
Cunuggu waa unugyada sii kordhaya. Wuxuu ubaahan yahay qiyaastii saacadaha baruurta oo ah dhismaha dhismaha unugyada jidhka ilmaha. Jerusalem artichoke waxay ka kooban tahay tiro ku filan, waxay awood u leedahay in ay hagaajiso shaqooyinka ugu badan xubnaha iyo xoojinta jirka.
Saamaynta sirta sare ee jirka ee koritaanka jirka waa mid fiican.:
caadiyan shaqada shaqada ee dheef-shiid kiimikaadka;
waxay kordhisaa rabitaanka cuntada;
waxay la dagaallantaa madoow, qandho, lallabo;
waxay xoojisaa difaac;
ku dagaalamaya dulinka jirka;
nadiifiyaa jirka sunta;
bixiyaha fitamiinada xilliga guga iyo dayrta;
wuxuu yareynayaa heerka sonkorta;
waxay kordhisaa xaddiga dhiigga ee dhiigga ku jira dhiigga;
Kaadida cusbada ee kaadida ayaa baaba'aysa.
Hirgelinta habboon ee artichoke Yeruusaalem ee cunnooyinka cunuga ayaa xaqiijin doonta horumarka isku-mar ee muruqyada iyo lafta lafta.
Midhaha caanaha ayaa la siin karaa carruurta laga bilaabo da'da shan jirka.. Carruurta yaryar waa inay karkariyaan ama dufaan khudaar cagaaran.
Waxyeela jirka ilmaha
Si taxadar leh ula soco talooyinka dhakhtarrada oo isku day inaadan soo bandhigin khudradda cagaaran ee carruurta ku jirta cuntada kahor sanadka. Waxaad u baahan tahay inaad ku bilowdo qaybo yaryar. Sida shey kasta oo kale, pear wuxuu keeni karaa xasaasiyad xasaasiyadeed. Xasaasiyad shakhsi ah ayaa dhici karta dhowr maalmood ka dib soo bandhigidda alaabta:
finanka guduudan ee maqaarka ilmaha yar;
dhibco qallalan oo wejiga;
calool xanuun, saxaro dabacsan.
Haddii dhibaatooyinka noocaas ah ay dhacaan, iska tuur feedhaha oo mar kale iskuday mar marka ilmuhu yar yahay. Isku duubo Yeruusaalem oo qurubyo kale ku leh.
Geedka khalkhalka wuxuu keeni karaa isbeelis iyo kufin cunug.
Maxay u fiican tahay haweenka iyo sida loo isticmaalo?
Aynu tixgelinno in khudradani ay faa'iido u leedahay haweenka. Waxaan kala saari karaa sifooyinka soo socda ee artichoke Yeruusaalem:
Ku dar waxyaabo badan oo cunno ah oo ku yaal Yeruusaalem. Waxay leedahay saameyn laga duro, waxay kaa caawineysaa in aad la tacaalto bararka iyo dheecaanka xad-dhaafka ah ee jirka.
Waad sameyn kartaa maaskaro wajiga, ama waxaad ku tirtiri kartaa casiirka cadceeda caleenta ah ee habeenkii. Jerusalem artichoke waxay yareyneysaa xanaaqa iyo bararka maqaarka, ka dibna codsiyo dhowr ah ka dib waxaad ogaan doontaa in roogga ganaaxa la nadiifiyo.
Wuxuu ka caawiyaa in laga takhaluso xayiraadda. Si tan loo sameeyo, diyaariso faleebo ah caleemo qallalan ee xidid qoraxda iyo litir oo biyo karkaraya.
Topinambur waxay kaa dhigi doontaa timahaaga jilicsan iyo silsilad. Si arrintan loo sameeyo, sidoo kale isticmaasho faleebo oo biyo raaci madaxooda.
Jerusalem artichokes waa mid aad u faa'iido badan oo looga hortago cuduro badan, iyo sidoo kale in lagu daweeyo kuwa jira.
Miyuu dhib u keeni karaa dumarka?
Jerusalem artichoke dhirta gabi ahaanba ammaan ah. Inta badan waxaa lagu yaqaanaa faa'iidooyinka caafimaad, laakiin maaha wax saameyn ah oo waxyeello u geysanaya jirka bini'aadamka. Waa inaadan qaadin hal keli kaliya, haddii aad leedahay shucuur qofkasto ah iyo dareen-celin xasaasiyadeed oo ka mid ah qayb kasta oo ka kooban.
Geedka khalkhalka wuxuu keeni karaa dheellitirnaan iyo isbeddel. Hase yeeshee, haddii faa'iidooyinka soo dhaweynta ay aad u sarreeyaan, calaamadahani waxay la dagaallami karaan caawinta daawooyinka kale, ama tirada dalagyada la cuno ayaa la yarayn karaa.
Saameyn faa'iido leh oo ku saabsan jirka ragga
Dad badan ayaa xiiseynaya in ay faa'iido ka helaan asaas ahaan jinsiga xooggan iyo haddii ay sidaas tahay, midkani. Ragga intooda badani waxay ka taxaddaraan ilaalinta awooddooda, ama dib u dhiska. Waxay isticmaalaan daroogo badan oo daawooyinka dawooyinka ah oo lagu shubo jirkooda waxayna keenaan waxyeelo weyn. Laakiin waxaa jira ikhtiyaar kale, nin waa ku filan inuu isticmaalo maalin kasta hal saxan oo ku jira pear dhoobo ah. Iyada oo adeegsashada joogtada ah ee xididka cadceeda, nin wuxuu iloobi doonaa dhibaatooyinkiisa.
Khabiirada ayaa sidoo kale ku doodaya in weyn 100 garaam oo khamri ah oo Yeruusaalem ah oo jilicsan oo nus saac ah ka hor inta aan la galmoonin.
Cawaaqib xun oo ragga ah
Sida carruurta iyo dumarka, ragga waxaa suurtagal ah in la ogaado shakhsiyaadka loo yaqaan 'artichokes'. Marka la cuno, sicir-bararka iyo leexashada ayaa dhici karta. Ma jiraan saameyno kale oo xun oo la ogaaday.
Isticmaalka pear dhulka ee ujeedooyinka daawooyinka
Jerusalem artichoke waxaa ku jira dukaanka of vitamins. Waxaan dhihi karnaa waa wax dabiici ah oo dabiici ah oo bogsiin kara. Qof kasta, dabcan, wuu jecelyahay. Waxaa jira cuntooyin badan oo ka dhigaya "wax la cuni karo." Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo pear earthen sida tonic, si loo ilaaliyo difaac iyo hargab, dhammaan dadka oo aan ka reeban. Gaar ahaan dadka deggan magaalooyinka waawayn, jirka oo ku jira qadar weyn oo jajab ah, cusbada iyo waxyaabaha kale.
Haddii aad ogtahay waxtarka ku saabsan faa'iidooyinka iyo sifooyinka daawooyinka, markaa waxaad awood u leedahay in aad si fiican u baratid cuntada oo aad u ilaaliso caafimaadkaaga iyo jirkaaga xaalad wanaagsan:
Jerusalem artichoke waxay caadiyan ka shaqeeyaa nidaamyada jireed ee badan: wareegga dhiigga, neerfaha, difaaca, endocrine.
Marka naas-nuujintu kordhiso nuujinta dumarka. Si arrintan loo sameeyo, qaado khudradda ceyriinka ah, ama cabitaanka cabitaanka caanaha Yeruusaalem.
Waxaa lagula talinayaa inaad qaadato cudurrada beerka: cirrhosis, cagaarshow, suntan jirka.
Faa'iidada ugu weyn ee isticmaalka joogitaanka sonkorowga iyo kahortagga kansarka.
Haddii aan ka hadalno cudurro gaar ah, daawada dadweynaha, cudurrada asaasiga ah ee kala duwan ayaa loo kala soocayaa, daaweynta loo yaqaan 'artichoke Jerusalem', sababtoo ah sifooyinka wanaagsan iyo sifooyinka, waxaa loo isticmaalaa:
Cudurrada Catarrhal. Ujeedooyinka daaweynta, waxay isticmaashay dhamaan qaybo ka mid ah Jerusalem artichoke, oo ka bilaabma inflorescences iyo soo afjaridda digriiga. Xaaladdan, waxaan u baahan nahay ubaxyada geedka, la jajabiyey. At 1 tbsp. waxaad u baahan tahay inaad qaadato galaas biyo ah karkariyo kuna adkeyso ilaa lix saacadood. Qaado saacad ka hor cuntooyinka 3-4 jeer maalintii.
Anemia. Si aad hal galaas oo casiir weyn ah u baahan tahay inaad ku darto 1 tbsp. malab Cab galaas subaxdii iyo habeenkii calool madhan.
Sonkorowga iyo Dhiirrigelinta. 2 tbsp Suugo ka soo jeeda juuska dhulka hoostiisa ah 2.st.l. biyaha. Qaado aroortii oo kaliya calool madhan. Waxaa lagula talinayaa inaad cabto 6-12 bilood.
Gastric iyo duodenal boog. 100 gr. juice ka soo digriiga Jerusalem artichoke qaaday saddex jeer maalintii. Tani waa in la sameeyaa ka hor cunto.
Detoxification. Cab hal galaas oo casiir ah subaxdii iyo habeenkii calool madhan.
Xanuun wadajir ah, sciatica. Wixii daaweynta cudurka this waxay u baahan doontaa 1.5 kg ee caleemaha geedka. Ku buuxi 8 litir oo biyo ah una keen karkar. Yaree kuleylka oo dabka ku hay ilaa qiyaastii nus saac. adkaada marinka dhalada ah, oo ku qaado qubeyska ilaa 15 daqiiqo. Waxaa lagu talinayaa in lagu daweeyo ilaa 20 maalmood.
Pankreatitis. Daaweynta cudurkan waxaad u baahan tahay inaad cunto qiyaastii 150 garaam. Dalagyada rootiga ee pear earthen, labadaba dhoobo, iyo nooc caan ah. Laga soo bilaabo qashinka waa ka wanaagsan tahay in la diido. Waxaad samayn kartaa decoction: ku dar 7 digriiga ilaa laba litir oo biyo ah. Ku kari ilaa 10 daqiiqadood. Qaado maraq intii lagu jiray maalintii. Maalin kadib, ku celi habka.
Dhiirrigelin. Iyada oo cadaadis korodhay, waxaad isticmaali kartaa casiirka geedka. U diyaarso biyo isku dheelitiran isla markaana cabbo 200 garaam saddex jeer maalintii.
Markaad miisaan culus, Jerusalem artichoke ayaa sidoo kale ka ciyaara kaalin aad u muhiim ah: Maxay tahay sababta ay faa'iido u tahay? Haddii lagu daro dieterka cuntada, waxay u dhaqmi doontaa sida duriinka. Ka saarida dheecaanka xad-dhaafka ah ee jidhka, waxay tirtirtaa cusbada qashinka ah.
Yeruusaalem waxay kor u kacday kaloori yar waxayna awood u leedahay in ay jidhka ka nadiifiso daawooyinka kale. Waxaad heli doontaa faa'idada keliya haddii aad ku dareyso suxuunta cuntada.
Jerusalem artichoke waxaa loo yaqaan for badan oo ay faa'iido. Guryaha waxtarka leh ee muhiimka ah iyo maqnaanshaha ku-oolka ah ee maqnaanshaha ayaa kuu oggolaanaya inaad qaadato daawo ahaan. Dhakhaatiirtu waxay kugula talinayaan sonkorowga, heerarka insulin-ta sareeya, ragga iyo dumarka inay nadiifiyaan heerarka hoormoonka. Warshadu ma awoodi doonto inay waxyeello u geysato, haddii aanad qabin macaamil xumo shakhsi ah. Qaybaha qaarkood. Ka taxadar intaadan isticmaalin.